Mpofu News - Mpofu Latest news on thatscricket.com
South Africa cruise past Zimbabwe at Bulawayo
Bangalore: Indian-born South Africa debutant Gulam Bodi made a half century as they beat Zimbabwe by five wickets in the first of their three-match one-day series at Bulawayo on Wednesday. ...
Skipper Bray leads Eire to competitive 221/9
More imagesKingston (Jamaica):Jeremy Bray carried his bat for his second one-day international hundred, as Ireland set Zimbabwe 222 for victory in the second Group D match of the World Cup at Sabina Park here on Thursday. ...
Eire-Zimb feature in an edge-of-the-seat tie
Kingston (Jamaica):Debutants Ireland tied a thrilling World Cup Group D match with Zimbabwe on Thursday after both sides ended the contest on 221 here at Sabina Park. ...
Zimbabwe decide to field against Ireland
Kingston (Jamaica):Zimbabwe won the toss and chose to field in their Group D match of the World Cup against Ireland on Thursday here at Sabina Park. ...
Aftab and Rahim lead Bangladesh to series win
Harare:Aftab Ahmed and Mushfiqur Rahim has lifted Bangladesh to a dramatic one wicket win in the fourth and final one day international against Zimbabwe here. ...
Zimb spinners restrict Bangla to 220 in Bogra
Bogra (Bangladesh):Zimbabwe pacer Christopher Mpofu and spinner Keith Dabengwa restricted Bangladesh to 220 runs in 49. ...